Tuesday August 04, 2020 - 18:15:26 in Wararka by Mogadishu Times
Hooyo Soomaaliyeed oo degan Magaalada Muqdisho ayaa shan carruur oo mataano ah ku umushay Isbitaalka Recep Tayyip Erdoğan (Ex Digfeer), ka dib markii qaliin lagu sameeyay. Hooyadan ayaa maalintii Arbacada saddex wiil iyo laba hablood ku
Hooyo Soomaaliyeed oo degan Magaalada Muqdisho ayaa shan carruur oo mataano ah ku umushay Isbitaalka Recep Tayyip Erdoğan (Ex Digfeer), ka dib markii qaliin lagu sameeyay. Hooyadan ayaa maalintii Arbacada saddex wiil iyo laba hablood ku umushay Isbitaalkan Degmada Hodan ku yaala, waxayna xaaladda carruurta ahayd mid wanaagsan. Warkan ayaa soo shaac-baxay saacadihii la soo dhaafay, ka dib markii barta Mogadişu Somali Türkiye Recep Tayyip Erdoğan uu ku leeyahay Twitter-ka lagu baahiyay warka la xiriira shanta mataanaha ahi, ee ay hooyadan Soomaaliyeed ku umushay isbitaalkaasi.
"Gabadhan waxay ka tahay waxyaabaha mucjisooyinka ah, ee sida naadirka ah loo arko caalamka, waana kiiskii ugu horeeyay intaan hubo Somaliya, hooyo inay shan canug halmar umusho.” Ayuu yiri Dr. Axmed Isaaq.
Hooyo 5 mataano ku umushay Magaalada Muqdisho